आफ्नै गीतले दुखेको अमृताको मन - Jyotinews
आफ्नै गीतले दुखेको अमृताको मन
गोमा परियार २०७८ भदौ १२ गते १४:२०
‘सधैं मेरो दुख्यो दिलको घाउ, झुटो माया चाहिँदैन पापिको तिम्रो नासो फिर्ता लिन आउ….!’
लोकदोहरी गायिका अमृता नेपालीले गाएको यो गीत जति चर्चित छ । त्यति नै पोल्छ उनलाई यही गीतले । किन गाएँ यो गीत भनेर अमृता सोचमग्न हुन्छिन् ।
भन्छिन्, ‘यो गीत गाएर मेरो जीवन यस्तो भएको पो हो कि । गीत नगाएको भए हुन्थ्यो लाग्छ ।’ १७ वर्ष अगाडि बजारमा आएको यो गीत आज आएर उनकै जीवनमा मेल खान पुगेको छ ।
गीत हिट, गायिका गुमनाम
चर्चित बनेको उनको पहिलो गीतमा साथ दिएका छन्, रामु नेपाली र दिपक क्षेत्रीले । उनी १९ वर्षको उमेर । बागलुङमा उनी ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् । उनको गीत एकाएक गीत हिट बन्यो । सानै उमेरमा चलेको गीतबाट बधाइ र प्रशंशा ओइरिन्थयो, अमृतालाई ।
त्यसपछि उनका पाइलाहरु मोडिए । जीवनको लय अर्कै गतिमा चल्न थाल्यो । गीत गाउने गायिकाको खोजी हुन्थ्यो तर उनलाई घरबाट कसैको साथ पाउन सकिनन् । उनी गुमनाम बनिन् । सांगितिक क्षेत्रबाट उनी ओझेल परिन् ।
गाउँमैसँगै पढ्ने साथीसँग अमृताले ०६२ सालमा बिवाह गरिन् । विवाह उनको लागि प्रेम नभएर गलाको पासो बनेको दुखेसो गर्छिन्, उनी ।
विवाह भएको एक वर्षमा श्रीमान बिदेश गए । उनी श्रीमानको प्रतीक्षामा बस्थिन । तर न फोन न चिठ्ठी नै आउँथ्यो । मोबाइल थिएन । गउँको सेटमा फोन आउँथ्यो । तर अमृताको कुरा गर्ने पालो कहिले आएन ।
‘हातमा फोन थिएन । गाउँको सेटमा फोन आउँथ्यो । सबै कुरा कुरा गर्थे तर मेरो कहिले पालो आएन,’ उनी भन्छिन् ।
दलित समुदायभित्रै पनि विभेदमा पर्दै गइन् अमृता । श्रीमान नै वैरी बन्न थाले । माया त परको कुरा । भन्छिन्, ‘हाम्रो प्रेम विवाह हो तर मेरो आमा परियार र बुवा सार्की भएकाले जात मिलेन भनेर विभेद भयो । कोठामा जानसमेत पाइन । श्रीमान रिसाउने, झगाडा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । नबोलेरै टाढिनुभयो ।’
असारको महिना । मुसलधारे पानी पर्ने समय । घरमा बस्न उनले पाइनन् । उनको बसाइ गोठमा पुग्यो । ‘सानै उमेर थियो । सुत्केरी थिए । पानी परेर चिसो हुन्थ्यो । सानी छोरीलाई चिसोमै राख्नु प¥यो । आँखा सुनिन्थ्यो,’ उनले दुखको पोको फुकाइन् ।
न्वारान नभएसम्म माइत जान नमिल्ने भएकाले १५ दिन उनका लागि वर्षै बन्यो । न्वारन गरेपछि उनी माइत गइन् । एक छाक मिठो खान नपाएकी अमृताले दुख कष्ट सहेरै बसिन् । माया गरेर हरेक दुखमा साथ दिन्छु भनेर ल्याएको श्रीमान एकदिन फर्किन्छन् भन्ने आश थियो, अमृतालाई ।
‘माया नगर्ने, बिर्सेकोलाई पर्खेर नबस घर(माइती) आइज भनेर बुवा–आमाले भन्नुहुन्थ्यो तर मैले माइती, आफ्नो र घरको इज्जत सम्झेर बसे । माया गरेको मान्छे हो फर्किन्छ की भन्ने आशमा नौ वर्ष पर्खिए तर आउनु भएन,’ उनी भन्छिन् ।
एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष गर्दागर्दै नौ वर्ष पुग्यो तर श्रीमान फर्केनन् । आश नरहेपछि उनीले नर्कजस्तो जीवनबाट अलगिने निधो गरिन् । ०७१ सालमा उनले श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् र छोरीसँगै माइतीमा बस्न थालिन् ।
आमा छोरी एक अर्काको सहारा…
अमृताकी छोरी एलिसा १५ वर्ष पुगिन् । छोरी ११ कक्षामा अध्ययन गर्दै छिन् । श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि छोरीलाई हुर्र्काएर बसेकी अमृता छोरीको शिक्षाको लागि विदेश जाने सोचमा थिइन् ।
‘कहिलेकाहि त मरौ जस्तो लाग्थ्यो । छोरीको मुख हेर्थे बुवाले त छोड्यो मैले पनि छोडे कति दुख पाउली ? के होला अवस्था ? यहि सोचेर मैले बाच्ने हिम्मत गरेकी हुँ’, उनी भन्छिन् । छोरीको साथ माया नै उनको बाँच्ने आधार बनेको छ ।
अनि फर्किइन् सांगितक क्षेत्रमा…
अमृता काम विशेषले ०७३ मा काठमाडौं आएकी थिइन् । काठमाडौं आएपछि ‘सधंै मेरो दुख्यो दिलको घाउ’ गीतको गायिका हुन् भनेर धेरैलाई थाहा हुन थाल्यो । चिनेको आफन्तको माध्यमबाट दोहोरी साँझमा जाने मौका पाइन्, अमृताले ।
दोहोरी साँझमा उनले गाउन थालेपछि स्वर सबैले मन पराउन थाले । विदेश जाने सोच बनाएकी अमृताको मन गीत संगितमै फर्कियो । यहि पेशालाई निरन्तरता दिने दोहोरी साँझमा गाउन सुरु गरिन्, उनले ।
अहिले अमृताका लगातारे गीत बजारमा आइरहेका छन् र दर्शक श्रोताको माया पनि उत्तिकै पाएकी छिन् । उनको स्वरमा यो वर्ष ‘नासो’ र माइती देशैको’ बोलका दुई वटा तीज गीत बजारमा आएका छन् ।
यहि भदौ २५ गते ‘सालको पात उडायो बतासैले’ उनको आफ्नै गीत सार्वजनिक हुँछै छ । अमृतासँगै गायक बसन्त थापाको स्वर रहेको गीतमा शब्द तथा संगीत सर्जक रमेश परियारको छ । उनको स्वरमा डेढ सय बढी गीत रेकर्ड भएका छन् ।
भन्छिन्, ‘यहि गायन पेशाले छोरीलाई पढाएको छु । खुसीसाथ जीवन जिएको छु ।’
विष्णु माझीलगायत यी २८ कलाकार विभूषित हुँदै
बलिउड अभिनेता अजय देवगनले ४०० करोडको फिल्म बनाउँदै